Hordhaca qoraaga - Ururka aasaasiga ah
Qoraaga Muhiimka u ah:
Fikir iyo DESTINY
Buuggan waxaa loo qoondeeyay Benoni B. Gattell xilliyada u dhaxaysa sanadaha 1912 iyo 1932. Tan iyo markaas waxaa la soo shaqeeyay mar kale mar kale. Hadda, 1946, waxaa jira bogag kooban oo aan ugu yaraan wax ka beddelin. Si looga fogaado soo noqnoqoshada iyo dhibaatooyinka boggaga oo dhan waa la tirtiray, waxaan ku daray qaybo badan, cutubyo iyo boggag.
Haddii aan gargaar la helin, waa shaki ku jirey in shaqada la qori lahaa, sababtoo ah way igu adagtahay inaan ku fekero oo aan qoro waqti isku mid ah. Jidhkaygu waa inuu weli jiraa inta aan moodayay in mawduuca uu yahay qaab foomka oo doortay erayo ku habboon si uu u dhiso qaabka foomka: sidaas darteed, runtii waan kaaga mahadnaqayaa shaqada uu qabtay. Sidoo kale waa inaan ixtiraamaa xafiisyada noocan ah ee saaxiibada, kuwaas oo doonaya in aan lagu magacaabo, talooyinkooda iyo caawinaada farsamada dhammaystirka shaqada.
Howsha ugu adag waxay ahayd in la helo shuruudo lagu muujiyo mawduuca dib u celinta maado ahaan. Dadaalladaydu waxay ahayd inay hesho ereyo iyo odhaahyo kuwaas oo si fiican u soo bandhigi doona macnaha iyo sifooyinka dhabta ah ee dhabta ah, iyo inay muujiyaan xidhiidhkooda aan la garan karin ee miyir-beelka bini'aadamka. Kadib markii isbeddello soo noqnoqonayay ayaan ugu dambayntii dejiyey ereyada halkan lagu isticmaalay
Maadooyin badan lama caddeeyo sida aan jeclaan lahaa in ay noqdaan, laakiin isbeddellada la sameeyay waa in ay ku fillaadaan ama ay noqdaan kuwo aan dhammaad lahayn, sababtoo ah akhris kasta oo akhriska ah waxay u muuqatay la talin.
Dadka khibradda leh waxay ku adkeeyeen baahida loo qabo in laga hadlo qaar ka mid ah waayo-aragnimadayda ku saabsan xaaladaha miyir-qabka, iyo dhacdooyinka noloshayda oo laga yaabo inay ka caawiso sharaxaadda sida ay suurtogal ii tahay in la i barto oo aan qoro waxyaabaha sidaasi ah isbeddelka hadda la aaminsan yahay. Waxay yiraahdaan waa arrin lagama maarmaan ah sababtoo ah bibliyografi laguma soo lifaaqin mana jirto tixraacyo loo soo bandhigo si loo caddeeyo qoraallada halkan ku qoran. Qaar ka mid ah waayo-aragnimadayda waxay ahaayeen kuwo ka duwan wixii aan maqlay ama akhriyey. Fikradda gaarka ah ee ku saabsan nolosha bini'aadamka iyo adduunka aan ku noolnahay ayaa shaaca ka qaaday maadooyinka iyo dabeecadihii aan ka helin buugaagta. Laakiin waxay noqon kartaa mid aan macquul aheyn in laga fikiro in arrimahan oo kale ay noqon karaan, haddana aan la garanayn dadka kale. Waa inay jiraan kuwa yaqaan laakiin ma sheegi karaan. Waxaan ku jiraa ballanqaad sir ah. Waxaan ka tirsanahay urur aan jirin. Anigu ma ihin rumaysad aan ku sheego waxa aan helay iyada oo la fekerayo; iyadoo feker joogto ah ku jirto markaad kacsan tahay, ma seexanayso ama sariirta. Marnaba ma aanan dhicin, mana aan jeclaan lahaa in aan ujeeddo nooc kasta ah.
Waxa aan fahmay markii aan ka fikirayay maadooyinkaas sida mawaadiicda, halbeegyada arrinta, dastuurka arrimaha, sirdoonka, waqtiga, cabbirka, abuurista iyo dibadaynta fikradaha, waxaan rajeynayaa, inay furay mustaqbalka sahaminta iyo dhiig-miirashada . Waqtigaas habdhaqanka saxda ah waa inuu ahaadaa qayb ka mid ah nolosha aadanaha, waana inuu ilaaliyaa farriinta sayniska iyo abuurista. Markaa miyir-beelku wuu sii wadi karaa, iyo Madax-bannaanaanta Mas'uuliyadda waxay noqon doontaa xukunka nolosha qofka iyo dowladda.
Halkan waxa ku yaal khibradihii hore ee noloshayda hore:
Qiimeeyuhu wuxuu ahaa dareenkeyga koowaad ee xiriirka la leh adduunkan jir ahaaneed. Dabadeed waxaan dareemay inaan dareemayo jidhka dhexdiisa, oo waxaan maqli lahaa codad. Waan fahmay macnaha codadka ay sameeyeen codadka; Waxba ma arkin, laakiin waxaan dareemayaa, inaan dareemayo, macnaha mid ka mid ah ereyada-dhawaaqyada lagu sharxay, iyo dareenadayda ayaa siiyay foomka iyo midabka alaabta lagu sharaxay erayada. Markii aan isticmaali lahaa dareenka aragga oo aan arko sheyda, waxaan helay faylasha iyo muuqaalka aan anigu, dareen ahaan, dareemay, inaan qiyaasta qadarin ku sameeyo wixii aan qabtay. Markii aan awooday inaan isticmaalo dareenka aragga, maqalka, dhadhanka iyo urinta, waydiin karaa oo ka jawaabi karaa su'aalaha, anigana waxaan dareemay inaan noqdo qof ajnabi ah oo adduunyo qariib ah. Waan ogaa inaanan ahayn jidhka aan ku noolaa, laakiin cidna iima sheegi kartid cida aan ahay ama meesha aan ka imid, badankoodana kuwii aan su'aalay waxay u muuqdeen inay rumaysan yihiin inay ahaayeen meydadkii ay ku jireen.
Waxaan gartay inaan kujiro jir aanan ka madax banaanaan karin nafteyda. Waan lumay, keligay, iyo xaalad murugo leh oo murugo leh. Dhacdooyinka iyo khibradaha soo noqnoqday ayaa igu qanciyay in arimuhu aysan ahayn sida ay u muuqdeen; inuu jiro isbeddel sii socda; in aysan jirin wax waara; in dadku inta badan sheegaan caksiga waxa ay dhab ahaan ula jeedaan. Carruurtu waxay ciyaareen ciyaaro ay ugu yeedheen "rumaysad" ama "aan iska dhigno." Carruurtu waa ciyaareen, ragga iyo dumarkuna waxay ku dhaqmayeen aaminaad iyo iska yeelyeel; marka la barbardhigo dad yar ayaa runtii run iyo daacad ahaa. Qashin ayaa ku jiray dadaalkii aadanaha, muuqaaladiina ma raagin. Muuqaallada looma sameynin inay sii socoto. Waxaan isweydiiyay: Sidee ayaa loo sameeyaa waxyaabo sii jiraya, oo laga dhigo bilaa qashin iyo qas? Qayb kale oo naftayda ka mid ah ayaa ku jawaabtay: Marka hore, ogow waxaad rabto; arag oo si joogto ah maskaxda ugu hayso foomka aad ku heli lahayd waxaad rabto. Markaa ka fikir oo samee oo ku hadal taas muuqaal ahaan, iyo waxaad u maleyneyso in laga soo ururin doono jawiga aan muuqan oo lagu hagaajin doono iyo hareeraha foomka. Markaa kuma aanan fikirin ereyadan, laakiin ereyadan waxay muujinayaan wixii aan markaas ka fikiray. Waxaan dareemay kalsooni inaan sameyn karo taas, isla markiina waan isku dayay iskuna dayay waqti dheer. Waan fashilmay. Markii aan guuldaraystay waxaan dareemay sharaf dhac, sharaf dhac, iyo xishood.
Anigu ma caawin kari waayay dhacdooyinka. Waxa aan maqlay dadka waxay tiraahdaa wixii dhacay, gaar ahaan dhimashada, uma muuqan macquul. Waalidiintaydu waxay ahaayeen Masiixiyiin cibaado leh. Waxaan maqlay in ay akhriyaan oo sheegay in Ilaah wuxuu sameeyey dunida; in uu abuuray nolol aan dhimaneyn oo ah jidh kasta oo bini'aadam oo adduunka ah; iyo in naftayda aan Ilaah addeecin lahaa lagu tuuri lahaa cadaabta oo waxay ku gubi doonaan dab iyo baaruud weligiis iyo weligiis. Anigu ma rumaynin eraygaas. Waxay u muuqatay mid aan caqligal aheyn in aan u malaynayo ama rumaysanahay in wax kasta oo Ilaah ah ama uu noqon lahaa duni ama wuxuu ii abuuray jidhka aan ku noolaa. Waxaan farta ku gubay farsamadiisa, waxaanan rumaysanahay in jidhku gubi karo; laakiin waan ogaa inaan ahay, waa maxay miyir igu ahayd, inaan gubi karin oo aan dhiman karin, in dab iyo baaruudba ay i dili karin, inkasta oo xanuunkaas uu ka yimid gubanku uu ahaa mid cabsi badan. Waan dareemi karay khatarta, laakiin ma aanan baqin.
Dadku uma muuqdaan inay ogaadaan 'sababta' ama 'waxa', nolosha ama geerida. Waan ogaa in ay jirto sabab u ah wax kasta oo dhacay. Waxaan doonayay inaan ogaado qarsoodiga nolosha iyo dhimashada, iyo inuu weligiis noolaado. Ma aanan ogeyn sababta, laakiin ma aanan caawin karin taas. Waan ogaa in aanay jiri lahayn habeen iyo maalin, nolol iyo geeri, iyo dunidaba, haddii aanay jirin dad caaqil ah oo maamula aduunka, habeen iyo maalin iyo nolol iyo geeri. Si kastaba ha ahaatee, waxaan go'aansaday in ujeedkeyga ay tahay inuu helo kuwan kuwa caqliga leh oo iiga sheegi lahaa sida aan wax u barto iyo waxa aan sameynayo, in lagu ixtiraamo qarsoodiga nolosha iyo dhimashada. Anigu xitaa kama fekereynin inaan u sheego arrintan, si adag ayaan u xallin doonaa, sababtoo ah dadku ma fahmi waayaan; Waxay i rumeeyeen inaan ahay nacas ama nacas. Waxaan ahaa qiyaastii toddoba sano jir.
Shan iyo toban sano ama ka badan ayaa la soo dhaafay. Anigu waxaan dareemay aragtida kala duwan ee nolosha wiilasha iyo gabdhaha, markay koraan oo ay badaleen raga iyo haweenka, gaar ahaan inta ay qaan-gaarayaan, iyo gaar ahaan kuwa aniga ii gaar ah. Aragtaydu way is beddeshay, laakiin ujeedadayda - in la helo kuwa caqliga leh, oo garanayey, iyo qofka aan ka baran lahaa qarsoonaanta nolosha iyo dhimashada - wax isbeddel ah ma lahayn. Waan hubaa jiritaankooda; dunidu ma noqon karto, iyaga oo aan lahayn. Marka la eego dhacdooyinka dhacdooyinka waxaan arki karaa in ay jirto dawlad iyo maamullo caalami ah, sida ay tahay inay jirto xukuumad waddan ama maareyn ganacsi kasta oo kuwan ka mid ah. Maalin maalmaha ka mid ah hooyaday ayaa i waydiisay waxa aan rumaystay. Iyadoo aan libiqsanayn waxaan dhahay: Waan ogahay in caddaaladku xukumo adduunka, inkasta oo noloshaydu u muuqato inay caddaynayso inaysan taasi ahayn, sababtoo ah waxaan arki karaa suurtagalnimada inaan ku guulaysto waxa aan ognahay, iyo waxa aan doonayo.
Isla sannadkaas, guga 1892, waxaan akhriyey warqad Axadda ah in Madam Blavatsky oo ahaa arday raga ah ee ragga ah oo lagu magacaabo Mahatmas; in hadday yihiin nolol lagu dhaariyo, haddana caqli bay helaysa. in ay hantiyeen qarsoonaanta nolosha iyo geerida, iyo in ay Madam Blavatsky u abuurtay inay sameeyaan Bulshada Qurbajiyadda, taas oo waxbarashadoodu la siin karo dadweynaha. Waxaa jiri lahaa casharo fiidkii ah. Waan tegay. Markaa kadib waxaan noqday xubin ka tirsan bulshada. Qoraalka ah in ay jiraan raggii xigmadda lahaa - oo magacyo kastoo loogu yeeray - ma aysan yaabin; taasi waxay ahayd caddayn afka ah oo keliya ee aan u hayo in ay noqoto mid muhiim u ah horumarka dadka iyo jihada iyo hagidda dabeecadda. Waan akhriyay wax walba oo aan ka qaban karo. Waxaan u maleynayay inuu yahay arday ka mid ah ragga xigmadda leh. laakiin fekerka joogtada ah ayaa ii horseeday inaan fahmo in qaabka dhabta ah uusan aheyn wax codsi rasmi ah qof kasta, laakiin inaan naftayda taam ahaado oo diyaar noqdo. Ma aanan arkin ama laga maqlin, mana aanan laheyn wax xiriir ah, 'kuwa caqli badan' sida aan uuraysto. Macallin ma lahayn. Hadda waxaan fahamsanahay arrimahaas. The 'Hodan' waa 'cajalado' dhab ah 'Triune Selves,' ee dhabta ah ee joogtada ah. Waxaan joojiyay xiriirka dhammaan bulshooyinka.
Laga soo bilaabo Nofeembar of 1892 waxaan soo maray marxalado la yaab leh oo muhiim ah, ka dib, kaas oo, guga 1893, waxaa dhacay dhacdadii ugu xumayd noloshayda. Waxaan ka tallaabsaday 14th Street at 4th Avenue, magaalada New York. Gawaarida iyo dadku way ka degdegayaan. Inkastoo ay xoojinayso barxadda geeska waqooyi ee waqooyi bari, iftiin, oo ka weyn kuwa aan qorraxda ee furan ee bartamaha madaxayga. Isla markiiba ama dhibic, daa'in ayaa la qabtay. Waqti ma jirin. Fogaanta iyo cabbiradu maaha caddeyn. Dabeecadda waxay ka kooban tahay cutubyo. Waan ogsoonahay qaybaha dabeecadda iyo unugyada sida Intelligences. Gudaha iyo meel ka baxsan, si aad u sheegto, waxaa jiray nalalka waaweyn iyo kuwa yaryar; waxay ka weyntahay nalalka yaryar, taas oo muujisay noocyada kala duwan ee cutubyada. Laydhuna maaha mid dabiici ah; waxay ahaayeen Lights sida Sirdoonka, Maqnaanshaha Nalalka. Marka la barbardhigo iftiinka ama iftiinka nalalka iftiinka, iftiinka qorraxda ku wareegsan wuxuu ahaa qulqul cufan. Iyada oo la adeegsanayo dhammaan nalalka iyo unugyada iyo walxaha aan ka bartay Jiritaanka Miyir-qabka. Waxaan miyir beelay miyir la'aanta dhabta ah ee dhabta ah, iyo garashada xidhiidhka waxyaabaha. Waxaan dareemay xiiso, dareemo, ama qosol. Erayadu waxay ku guul daraystaan ​​inay sharaxaan ama sharxaan SHARCIYADA. Waxay noqon doontaa mid aan ku habboonayn in la isku dayo sharaxaad ka mid ah awoollada iyo awoodda iyo kala dambeynta iyo xidhiidhka ka dhexeeya waxa aan ka bartay. Labo jeer afartan sanno ee soo socota, muddo dheer munaasabad kasta, waxaan dareemay miyir qabka. Laakiin wakhtigaas waxaan dareemay inaanan wax ka badan intii aan ka soo wareegay xilligii hore.
Inaad miyir qabtid Miyirku waa ereyada la xiriira ee aan doorto sida odhaahda ah in laga hadlo marxaladan awoodda badan leh iyo mid cajiib ah noloshayda.
Miyir-qabka waxa uu ku jiraa cutub kasta. Sidaa darteed joogitaanka Miyir-qabka wuxuu ka dhigayaa qayb kasta oo miyir-qabka ah sida hawsha ay u qabato heerka uu yahay miyir-beel.
Miyir-qabka Miyirku wuxuu muujinayaa 'aan-garanayn' qofka aad u miyir qabo. Kadibna waxa ay noqon doontaa waajibka qofka inuu ogaado waxa uu awood u yeelan karo miyir-beel.
Qalabka muhiimka ah ee miyir-qabka ah waa mabda'a ah in ay u sahlayso in uu barto mowduuc kasta, isagoo fekeraya. Fikirka waa feejignaanta joogtada ah ee Maqalka Maqalka ee mawduuca fikirka. Si kooban u sharaxan, fikirka waa afar marxaladood: doorasho mawduuca; qabashada iftiinka maqalka mawduuca; diiradda nalka; iyo, diiradda Nuurka. Marka Nuurka uu diirada saaro, maadada waa la yaqaan. Habkan, Dareenka iyo Dareenka ayaa la qoray.
Ujeedada gaarka ah ee buuggani waa: Inaad u sheegto miyir-beelka jidhka bani-aadmiga in aanu nahay qaybo farshaxan oo aan kala go 'lahayn oo ka mid ah shakhsiyaadka aan dhimaneyn, Triune Selves, kaas oo, gudaha iyo ka dibba, ayaa ku noolaa fikradda wayn ee Realm of Permanence; inaynu miyir qabanno hadda bini-aadmiga bini'aadamka, waxay ku guul-darreysteen imtixaan muhiim ah, oo sidan nafteena uga soo baxday Mujaahidiinta Mujaahidiinta ee ku wajahan ninka iyo haweenkan adduunka ku jira ee dhalashada iyo dhimashada iyo dib-u-noolaanshaha; inaanan xasuusineynin tan sababtoo ah waxaan nafteena isku dhignay hurdo isku dhafan, inaan ku riyoodo; in aan sii wadno inaan ku riyooneyno nolosha, dhimashada iyo dib usoo noolaanshaha nolosha; in aan sii wadi karno in aan sidan samayno illaa inta aan luminayno, toosno, annaga oo ka baxsanaynay hypnosis oo aynu isku dhiganno; inkasta oo ay qaadato waqti dheer, waa in aan ka riyoonaa riyadayada, inaan nafteena ku jirno sida jidhkeena, ka dibna dib u soo nooleyno oo aan dib ugu soo celino jirkeena noloshiisa weligeed ah ee gurigeena - Runtii Aaminka ah ee aan ka soo qaadnay - taas oo adduunkani waa midkeena, laakiin ma aragno indho beereed. Ka dibna waxaan si quman u qaadan doonaa boosaskeena oo aan sii wadno qaybaheena ku jira Amarka Dib-u-Eegista ah. Habka loo dhammeeyo waxa lagu muujiyey cutubyada soo socda.
Qoraalkan qoraal gacmeedkani wuxuu ka kooban yahay qoraaga. Waxaa jira waqti yar oo lagu daro waxa la qoray. Inta lagu jiro sanado badan oo diyaargaraynteeda waxaa badanaa la weydiiyay in aan ku daro qoraalka qaar ka mid ah tarjumaadaha cutubyada Kitaabka Qudduuska ah oo u muuqda kuwo aan fahmi karin, laakiin, iftiinka waxa lagu sheegay boggaan, macno iyo macne, , isla mar ahaantaana, caddayn erayada lagu sameeyay shaqadan. Laakiin waan ka xunahay inaan isbarbardhigo ama isbarbar dhigo. Waxan rabay in shaqadani lagu xukumo oo keliya qaddar u gaar ah.
Sanadkii la soo dhaafey waxaan iibsaday mug mug leh oo ka kooban Buugaagtii lumay ee Kitaabka Quduuska ah iyo Buugaagta Ilowday ee Ceeden. Markaad eegayso bogagga buugaagtaan, waa wax lala yaabo in la arko inta marinno ee la yaabka leh iyo kuwa kale ee aan la fahmi karin ee la fahmi karo marka qofku fahmo waxa halkan ku qoran ee ku saabsan Saddexmidnimada Iskeed iyo saddexdeeda qaybood; ku saabsan dib-u-cusbooneysiinta jirka jirka ee jirka oo loo beddelay jir jireed oo dhammaystiran, oo aan dhimanayn, iyo Boqortooyada Joogtada ah, oo ereyada Ciise ku qoran tahay "Boqortooyada Ilaah."
Codsiyo mar kale ayaa loo sameeyey si cad loogu qeexay marinka Kitaabka. Waxaa laga yaabaa inay fiicantahay in tan la sameeyo iyo sidoo kale in akhristayaasha Fikradda iyo Digniinta la siiyo qaar ka mid ah caddaynta inay caddaynayaan bayaano gaar ah oo ku jira buuggan, kuwaas oo caddaynaya in laga heli karo Axdiga Cusub iyo buugaagta kor ku xusan. Sidaa darteed waxaan ku dari doonaa qaybta shanaad ee Cutubka X, Gods iyo Diintooda, oo ka hadlaya arrimahaas.
New York, Maarso 1946
Sii wad Hordhaca ➔